Media data - Spielpunkt - mitambo yebhodhi nemitambo yemavhidhiyo
Kuonekwa nzvimbo DA-CH
SeedingUp ranking index
Kuonekwa indekisi: Chivabvu 0,2211, 0,3161 kusvika May XNUMX, XNUMX
Vimba Flow & Citation Flow
Domain Authority: 25 kubva ku100
Pamusoro 3: 1.170
Pamusoro 10: 5.040
Pamusoro 50: 12.300
Pamusoro 100: 21.670
60% varume, 40% vaverengi vechikadzi.
Boka rezera repakati rakatenderedza 40% pakati pemakore makumi maviri nemashanu kusvika makumi matatu nemana.
Vane makore gumi nemasere kusvika makumi maviri nemana ekuzvarwa uye vane makore makumi matatu nemashanu kusvika makumi mana nemana ekuzvarwa vanoverengera 18%.
Boka revaverengi makumi mana neshanu+ rine chikamu chinosvika gumi nematanhatu%.
Pakati pezvimwe zvinhu:
Mitambo yevana neyemhuri
Mitambo yebhodhi yevashandisi venguva dzose (senge zvinyorwa zvitsva zvemakirasi akadai seMonopoly, Risk, nezvimwewo)
Mitambo yebhodhi yevanotanga
Mitambo yebhodhi yevatambi vepamusoro
Zvido zvakakosha (peni & bepa, mitambo yemakadhi)
Kutamba mitambo (Fantasy, SciFi, SciFantasy)
Themed specials (senge yepamusoro rondedzero yebhodhi mitambo yevakuru)
Mishumo yazvino yekutengeserana kubva kumitambo yemitambo (inosanganisira Gamescom, SPIEL muEssen, kuratidzwa, magungano)
Online parlor mitambo / online mutambo masisitimu
Browser mitambo / smartphone uye piritsi maapplication
Vhidhiyo mitambo yekunyaradza uye maPC
Ruzivo rwekuongorora uye kushambadza
Ongororo yemitambo yebhodhi yevana nevakuru pamwe nemamwe mazano emutambo kubva kumunda wemitambo yeparlor ari pamwoyo wega wega blog yemutambo. Isu tinogara tichiongorora mitambo kuitira kuti tizivise vaverengi vedu kune akateedzana maitiro emitambo. Isu tinoedza kutungamira ongororo zvakanyanya sezvinobvira kune rakanangana neboka rakanangana.
Kutenda kune vese vaparidzi, vatsikisi uye vanogadzira nekupa makopi ekudzokorora uye masampuli, pasina izvo zvakawanda zvebhodhi mutambo kana bvunzo dzemitambo hazvigoneke.
Isu tinoedza kushambadza wongororo nekukasira, asi hatigone kutaura nguva kusvika yaburitswa (kunze kwekunge paine humwe hurongwa). Izvo zvakakosha kwatiri kuti tiburitse bvunzo dzemitambo nekukurumidza sezvinobvira. Zvisinei, panogona kuva nekunonoka, kunyanya panguva dzekutengeserana. Tinokumbira kunzwisisa kwenyu. Kana usingakwanise kuwana zita ratakatumira online, ndapota usazeza kutitumira mubvunzo.
Kushambadzira kubvunza uye kupa kwekushandira pamwe kunogamuchirwa pa info@spielpunkt.net.
Advertising / advertorials / anotsigirwa zvitumirwa
Unogamuchirwa kushandisa zvinyorwa zvinotsigirwa (advertorials) Kurudzira zvigadzirwa zvako uye mawebhusaiti. Unogona kuwana mamiriro pakukumbira. Isu takavhurika kumikana yekushambadzira kubva kuindasitiri yemitambo kana chikamu chetoyi.
Ehe, isu pachedu tinotarisira dhizaini yedhizaini uye, kana zvichibvira, tinogadzira yedu yemifananidzo zvinhu. Tingafara kukurukura rudzi uye urefu hwevashambadzi pachedu.
Chinokosha chiziviso: Mipiro yose yekushambadzira inonyatsooneka mumashoko ekusuma [Ratidza] yakamakirirwa chinhu chakabhadharwa chekusimudzira. Zvakadaro, zvinyorwa izvi zvinogara zvine ruzivo runobatsira kuzadzisa zviyero zvedu zvemhando yepamusoro.
Zvinogonekawo Banner advertising panzvimbo dzakasiyana pa Spielpunkt.net. Semuenzaniso pane peji reimba kana kunyanya mune zvinyorwa pamusoro pemitambo yebhodhi yakakodzera yevakuru nevana uyewo mumunda wemashoko emutambo we digital.
Mibvunzo inogamuchirwawo pa info@spielpunkt.net.